HIM | Health in Myanmar » 2012 » March
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စမ်းသပ်ရမဲ့ စစ်ဆေးနည်းများ
ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး အချင်းဖြစ်လာရင် အချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ (hCG) ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်း ထွက်လာတယ်။ သွေးကိုလဲ စစ်နိုင်တယ်။ ဆီးကိုလဲ စစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိဆီးစစ်တယ်ဆိုတာ ဒီဟော်မုန်း ပါနေ-မနေ စစ်ရတာဖြစ်တယ်။ စော်မုန်း ရှိနေတာ သာမကဘဲ အနည်း-အများလဲ စစ်သင့်တယ်။ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆိုရင် များနေမယ်။
ကုသမှုတွေ ထဲမှာ- ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ကူးစက် ရောဂါပိုးအား ကုသခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံ မှု ပြဿနာများကို ကုသခြင်း၊ ဟော် မုန်းညီမျှအောင်ကုသခြင်း၊ HIV ကဲ့သို့ သုက်ပိုးကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှ ထုတ်ယူပြီး ပြင်ပတွင် သန္ဓေအောင်စေသော နည်းများ ပါဝင်နိုင်တယ်။
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar6 comments
ကိုယ်ဝန် ၁၄ ပါတ်မှာ မိခင်လောင်းရဲ့သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်ထဲကနေ ရေမြွာအိပ်ထဲကို အရည်တွေရလာစေတယ်။ ကိုယ်ဝန် ဒုတိယ ၃ လကစပြီး ကလေးဟာ ရေမြွာရည်ကို မျိုချမယ်။ ကျောက်ကပ်ကနေ ဆီးစွန့်မယ်။ ရေမြွာရည်ထဲမှာသာ စွန့်ထုတ်လို့ ပြန်မျိုချအုံးမယ်။
Last word until Monday
Is there any evidence that plasmodia that are resistant to antimalarials have previously spread 'by land' through Myanmar before leaping over oceans and landing in India and Africa? The [him] moderator always thought that air travel of infected people must have been involved. Would using ACT in Myanmar stop the spread of resistance to Africa and India through Thailand? There arealot more Indians and Africans in Thailand than there are in Burma.
တကယ်လို့ သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥ နှစ်ခုက ပေါင်းစပ်ကြမယ်။ (ဆဲလ်) တခုတည်းကနေ နှစ်ဆတိုးနည်းနဲ့ စဉ်တိုက်ဆက်တိုက် ပွါးများလာတယ်။ Placenta အချင်း နဲ့ Membranes အချင်းလွှာတွေဖြစ်လာမယ်။ ဒါပေမဲ့ embryo သန္ဓေဖြစ်မလာဘူး။ ဒီအခြေအနေမျိုးကို Blighted ovum လို့ ခေါ်တယ်။
ဒီရောဂါရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကနေ ရင်သားနာနေလို့ပါရှင့်လို့ ပြောကြတာချည်းဖြစ်တယ်။ တချို့က အကျိတ်လိုလို တွေ့တယ်လဲ ပြောမယ်။ ခွဲစိတ်တဲ့အခါ Definite lump အကျိတ်သန့်သန့် တွေ့ရတာ မဟုတ်ဘဲ Indurated area မာခဲနေတာကိုသာ တွေ့ရတယ်။
Concept note for the Three Millennium Development Goals Fund
Here isaconcept note for the successor to the Three Diseases Fund, the 3MDG Fund. It must have been difficult to design withoutafinal evaluation of the Three Diseases Fund.
﻿ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရင်လိုနေလို့ရသလား (၂)
ကျန်းမာရေးအရ ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ လင်-မယားဆက်ဆံရေးဆိုတာ လိင်အင်္ဂါချင်း ဆက်ဆံမှုတခုထဲ မဟုတ်ပါ။ နှစ်ယောက်သား နားလည်မှုတော့ ယူကြရပါမယ်။
﻿HIV/AIDS လူမှုဝန်ထမ်း မဖြူဖြူသင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် NGO များအနေဖြင့် HIV/AIDS နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပလိုပါက၊ အာဏာပိုင်များထံ ခွင့်ပြုချက် အဆင့်ဆင့်တင်ရခြင်း၊ နေရာဒေသနှင့် လူဦးရေ ကန့်သတ်ခြင်းများ ရှိနေပါသည်။
Interview with Khin Nyein Chan
It is good to see Myanmar people getting out there to do interviews. For too long have the faces of hardworking HIV professionals not been seen.
အမေးအဖြေ၊ မတ်လ ၂၀၁၂ (၂) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
မိန်းကလေးတွေမှာ ဆီးအောင့်တာ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာ အဖြစ်များတယ်။ တခါဖြစ်ဘူးရင်လဲ ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ဆေးကုလို့လဲ မခက်လှပါ။ ဆီးသွားတိုင်းနာမယ်။ ဆီးပူမယ်။ ခဏခဏသွားချင်မယ်။ သွားချင် လာရင် မြန်မန်ြပြေးရတယ်။ ဆီးထဲ သွေးပါနိုင်တယ်။
ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်သည် စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သော သုခရိပ်မြုံ (HIV ကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ)၊ ၂၀၁၀ ဧပြီလ၌ စတင်တည်ထောင်သည့် ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွား ရိပ်သာတို့တွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်သည်။